Chọta anyị na:
Biko họrọ gị na peeji nke
Aguilera, Christina, Christina Aguilera, gba ọtọ, onye ọbụ abụ
Christina Maria Aguilera(* 18 December 1980, Staten Island, New York) bụ onye na-agụ egwú Pop America.
O tinyere aka na nkwekọrịta RCA Records mgbe ọ gụchara egwuEchichemaka ihe nkiri ahụMulan. Ya album mbụChristina Aguilera(1999) bụ ihe ịga nke ọma maka ọha na eze na ndị nkatọ, na na 2000 nke a na album a nwetara Grammy Award maka Best Newcomer. N'oge na-adịghị anya, ọ wepụtara otu ọba Latin-popMi Reflejo, bụ nke o meriri 2001 Latin Grammy maka akwụkwọ mpịakọta kachasị mma yana album dị na ChristmasỤdị Christmas mna abụọ a na-ere ahịa nke ọma.
2002 tọhapụrụ ya nke abụọ studio studioAkwụsịla, bụ nke ọ bụ nnọọ ihe okike. Ihe nkatọ ndị ahụ dị iche iche ma Christina natara Grammy Award ọzọ maka ya, ma o doro anya na ọ bụ mmekọahụ ka ọ na-eme mgbe ọ na-akwalite album a ghọrọ mkpesa siri ike na ịkwa emo. Ya atọ studio albumGaa na ndabere(2006) nwere mkpụrụ obi, jazzua blues. A rere ya nke ọma ma nata nkatọ dị mma ma mee ka Aguilera nwee nhọrọ abụọ Grammy.
Nwatakịrị na mmalite ọrụ
A mụrụ Aguilera na Staten Island, New York, nna yaFausto Wagner Xavier Aguilera, Sergeant nke US Army na nne yaShelly Loraine Fidler. Aguileřin nna bụ nke Latin si malite, a mụrụ ya na Guayaquil, Ecuador, mgbe nne ya bụ Canadian na German, English, Irish na Danish okpu. Ndị nne na nna Christine zutere mgbe nna ya jere oziEarnest Harmon Air Force Base(Airbase) na Stephenville, Newfoundland, Canada.
Ndị mụrụ ya lụrụ 20 nne ya ruo ọtụtụ afọ na nna ya 31. Aguilera biri nne ya na nna na ha 6 ma ọ bụ 7 afọ. Mgbe nne na nna ya gbara alụkwaghịm, nne ya wee were ya na nwanne ya nwanyị Rachel ka ha na nne nne obibi na Rochester, Pennsylvania, nke bụ a na-arụ ọrụ na klas esịt Pittsburgh. Dị ka Aguilera na nne ya ọ bụ nna Fausto akara ụdị na n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ mmetụta uche mkparị, nke na-apụta ìhè ya songs "M OK" na "Oh Nne". ' Mama Shelly weere ọkachamara n'ịgwọ ahụikeJim Kearnsma gbanwee aha ya na Shelly Kearns.
Mgbe Christina dị iri na anọ, ọ na-ede akwụkwọ mbụ yaAll I Wanna Do, a duet na onye Japan na-abụ abụ Keiz Nakashim.
Onye mbụ mara ikike olu Christin bụ nne nne ya. Christina chọsiri ike ịbụ onye ọbụ abụ. Dịka nwatakịrị ọ rụrụ na ihe omume dịgasị iche iche ma sonye na asọmpi talent ndị ntorobịa, ebe ọ na-abụkarị onye mmeri. N'oge na-adịghị anya, ọ dọtara mmasị ndị mgbasa ozi ma mara yaobere nwa agbọghọ nwere nnukwu olu.
Dị ka ngosichụpụrụVH1 ejiriwo nke a mechie. Mgbe ndị na-asọmpi mụtara na ha ga-aga megide ya, ha kwụsịrị ozugbo n'ihi na ha enweghị ohere ọ bụla megide ya. N'oge na-adịghị anya, ndị ya na ha dịkọrọ ndụ weere ya anyaụfụ, ọ ghọkwara ihe a na-akwa emo na ọbụna n'otu awa nke mgbatị ahụ ha gbalịrị ịwakpo ya. Dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, mmadụ atụbawo taya nke ụgbọ ala ezinụlọ ha. Ezinụlọ ahụ kwagara maka nke a, iwu Christinin nke talent ya gbachiri nkịtị iji gbochie ọgụ ọzọ.
15. March 1990 pụtara na asọmpi ahụSearch Starjiri abụỤdị Ịhụnanya nke Sundaysite na Etty James, ma o merighi. N'oge na-adịghị anya ọ nwụsịrị na asọmpi a, ọ pụtara na KDKA-TV na showSoro Larry Richert biliewee pụta otu abụ. Ndị mmadụ kwuru na "afọ iri ahụ dị ka afọ 20."
N'oge ọ bụ nwata na Pittsburgh, ọ bụrụ abụ na Star-Spangled Banner tupu Pittsburgh Penguins, Pittsburgh Steelers, na Pittsburgh Pirates (baseball). Ọrụ mbụ ya dị mkpa mgbe ọ bịara ngosi "New Mickey Mouse Club". Ndị ọzọ na-eme ihe ngosi ahụ bụ Britney Spears, Justin Timberlake, JC Chavez, Rhona Bennett (onye mesịrị ghọọ En Vogue), Ryan Gosling na Keri Russell. Dị ka akwụkwọ ahụ dịchụpụrụndị ọrụ ya kpọrọ ya diva.
Otu n'ime ọrụ ha kacha echefu echefu bụ, dịka ọmụmaatụ, mgbe ọ bụrụ abụEnweghị m ihe ọ bụlasite Whitney Houston. Mgbe ngosi 1994 ahụ kwụsịrị, Christina malitere ide ndekọ dị iche iche, na-enwe olileanya ịbanye na ụlọ ọrụ ndekọ.
1997 nọchiri anya United States na ememme mba ụwaGolden Starna egwu abụọ - nke Sheryl Crow na nke ọzọ site n'aka Diana Ross.
na1998na ime ụlọ ịwụ ahụ ọ bụrụ abụ na-agba gị ọsọ site na Whitney Houston ma dee ya na teepu. E3 kụrụ aka na ndekọ a. A họpụtara ya mgbe ahụ ka ọ bụrụ abụ abụ nke ngosi maka Disney's 'Mulan'(1998). Site na ịde abụ a, o nwetara ihe ndekọ na RCA Records, n'ime otu izu.Ntụgharị uche gara n'elu 20 na chaatị Billboard ma họrọ ya maka Golden Globe maka Best Original Song. A tọhapụrụ Christina Aguilera nke mbụ na 24. August 1999. Erute n'elu German 200 na Canadian chaatị dị iche iche na marketability 8 nde nkeji na US na 14 nde n'ụwa nile.
Ya otu Genie na a Bottle, Gịnị a Girl Chọrọ na Bịa na N'ime Baby (All m chọrọ bụ Ị) mbụ German Hot 100 karịrị afọ 1999 2000 na a otu m Sapeta Ị bụ atọ. Aguilera merie ndị Grammy maka Best New Artist na Best Female Olu Performance (maka song Genie Na A Bottle). Dị ka ndị dere òkè na album a ma pụta n'ime akwụkwọ ahụchụpụrụChristina chọrọ igosi nke akporo na audacity olu ya n'oge na nkwalite nke album na ya songs na-abụ abụ maka now ụbọ na-egosi na telivishọn so ya piano naanị. Ọ gwụchara afọ na ngosiNnukwu Ọhụrụ Ọhụrụ Afọ Ọhụrụna MTV nakwa otú ahụ bụ onye mbụ na-eme ihe nkiri nke puku afọ a na MTV.
Ekem ke 2000, Christina ke akpa ini ama enen̄ede ama Latin Latin ye nte enye esịnede utom 12 emi ọfọnde. Akwụkwọ mpịakọta Spanish mbụ nke 2000, Mi Reflejo. Akwukwọ a nwere nsụgharị Spanish nke abụ ndị ahụ site na mmalite ya.
Nke 27 bi. Billboard 200 na 1. na Latino chaatị. Ekele maka album a, Christina nwetara akara onyinye Latin Latino Grammy na 2001 maka Best Album Pop. N'ozuzu ya, akwụkwọ a rere 2,1 ọtụtụ nde iberibe ụwa nile ma merie ihe nkedo ọla edo na atọ platinum na US. O meriekwa nriteOnyinye Egwuregwu Ụwadị ka onye na-ese egwú Latin. Falsas Esperanzas ọbụ abụ si na album a gaa n'elu 40 na Argentina.
Christina weputara Christmas CD 24 Christmas. October 2000, nke a na-akpọ My Kind of Christmas. O ruru 28. kama Billboard 200, e rere 1,3 maka ọtụtụ nde iberibe na ihe ndekọ platinum na US. Ricky Martin gwara Christina ka o dekọọ onye ọ bụla na-achọ ka ọ nọrọ na album yaỤda olu. E wepụtara otu ahụ na 2001 dị ka nke abụọ site n'akwụkwọ a. Na UK na Germany, ọ gara TOP 5, US na TOP 20 na Switzerland, Canada na Australia na TOP 40.
Na 2001, Christina, na Lil 'Kim, Myou na P Nk Nkwo, ahọrọla ịmepụta Patti LaBelle nke 1975 Lady Marmalade maka ụda ụda maka ihe nkiri ahụ bụ Moulin Rouge! Lady Marmalade anọwo n'elu ederede maka izu ise, na n'ime obodo 11 na-esote ọ bịarutewokwa n'elu chaatị ndị ahụ, ọ na-akwụkwa Grammy ọrụ maka nkwado kacha mma.
N'afọ ahụ, a tọhapụrụ album ahụ n'ụlọ ahịaNaanị Nwee Onwe Gị, otu n'ime ihe ngosi ndekọ nke Christina dere mgbe ọ dị banyere 15 ruo ọtụtụ afọ. Mgbe ụlọ ọrụ ndekọ ya, RCA Records, chọtara ya, ọ gwara ndị agbụrụ ya ka ha ghara ịzụta nke a, na Germany, ọ dịghị ere ahịa.
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, ọ chọrọ ụlọ ọrụ ndekọWarlock Recordsịhapụ naanị ịbụ n'efu, album nke gụnyere ndekọ nchịkọta ọzọ. Chrstina gbara akwụkwọ megide ụlọ ọrụ ahụ maka imebi nkwekọrịta na megide ndị na-emepụta album a iji gbochie ịhapụ akwụkwọ ahụ. N'ikpeazụ, ndị abụọ kwekọrịtara ịhapụ akwụkwọ a. Aguilera nyere aha ya, ọdịdị ya na onyinyo ya ka ọ ghara imebi emebi. Ọtụtụ nkọwa banyere ikpe ahụ ka nọ na nzuzo. A tọhapụrụ album ahụ na 2001 ma Krisina 15 dị afọ iri na anọ.
Ọ bụ ezie na albumị mbụ nke Christina nwere ihe ịga nke ọma, ọ naghị enwe obi ụtọ na egwu na onyinyo o kere maka ya. N'oge ahụ, a na-ewere ụdị egwú egwú nke Christinin dị na pople pop, nke a na-ewu ewu n'oge ahụ. Otú ọ dị, Christina chetara ya n'ihu ọha na ọ chọrọ ka album ya ọzọ dịkwuo ụtọ, ma abụ ma egwu. Mmetụta nke Steve Kurtz (onye njikwa ya) dị oke aka karịa ya, na-elekọta usoro ya niile karịa njedebe nke nkwekọrịta ahụ.
Na October 2000 gbara akwụkwọ ikpe megide Kurtz n'ihi na ekwesịghị ekwesị, na-ekwesịghị ekwesị ma na-enwe mmetụta na-ezighị ezi na ọrụ ndị ọkachamara ya nakwa maka ịghọ aghụghọ. Dị ka akwụkwọ iwu kwadoro, ọ naghị eche banyere ikike na ọdịmma ya, ma kama ime ihe bara uru nye ya. Emere ihe a mgbe Christina chọpụtara na ya na-ewepụta ego ya karịa ka a na-ekwe ya, ndị enyemaka ndị ọzọ akwụkwara ego ahụ iji nyere ya aka. Ọ jụrụCalifornia State Labor Commissionkagbuo nkwekọrịta ahụ. Mgbe o nyechara Kurz akaebe, o goro Irving Azoff ka ọ bụrụ onye njikwa ọhụrụ. Ngbanwe a nke nhazi bụ oké mgbanwe, karịsịa na egwu ọ nọgidere na-eme.
Kurtz, n'otu ọnwa ahụ, kwụrụ ụgwọ ikpe ma gbaa ya akwụkwọ maka mmebi nke nkwekọrịta ya nke o kpebiri n'onwe ya. O kwuru na ikpe ahụ na ndị dị nso Christina gbalịrị imebi mmekọrịta ha na azụmahịa ma bookwa Azoff ebubo.
Christina n'oge njem ahụAkwụsịla
29. October 2002, mgbe ogologo oge gasịrị, wepụtara akwụkwọ nke abụọ na Bekee akpọ Stripped.
Na izu mbụ, 330 rere ya otu puku iberibe ma họrọ nke abụọ na chaatị Billboard 200. Ọtụtụ n'ime CD ndị ahụ gosipụtara Christina, bụ onye debanyere akwụkwọ mpịakọta na BMG na ọba a. Nke a nwere ọtụtụ ụdị: rnnb, ozioma, mkpụrụ obi, ballad, pop, nkume, hip hop na jazz. Ọtụtụ ndị nkatọ adịghị ewere akwụkwọ a na mmalite ya, ekwupụtaghị olu Christin ka ọ malitere ịzụlite ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. Mgbe a tọhapụrụ ya na album ahụ, e sere ya foto maka magazin dị kaOke, Rolling Stone a CosmoGirl!. Ọtụtụ n'ime foto ndị a gba ọtọ ma ọ bụ bụrụ ndị gba ọtọ. Ọ gọrọ na ọ chọrọ ịmalite mgbanwe a, dịka ya si kwuo, oyiyi ahụ dị mma karịa àgwà ya. Ọ malitere ịkpọ ya mgbanwe egoXtinaọ kwesŽrŽ Žb] chŽchŽ ya.
Ná mmalite, onyinyo a nwere mmetụta na-adịghị mma maka ọrụ ya, karịsịa mgbe a tọhapụrụ clip Dirrty. Na MTV, abụ a ghọrọ nnukwu ihe, ebe ọ na-adịghị egwu na Chart America. Ka o sina dị, Dirrty aghọwo ihe zuru ụwa ọnụ ma rute n'elu ndepụta ahụ n'ọtụtụ mba. The album gara TOP 5 na UK, USA na Canada. Nke abụọ nke Beautifulbyl nnukwu kụrụ na redio. Onye ọzọ a na - akpọ Fighter, Can not Hold Us Down (bụ nke na - akpọ Lil 'Kim) na Voice Voice n'ime afọ abụọ sochirinụ, ya mere, Christina debere chaatị ndị ahụ maka oge ahụ. Na nchịkọta listi (na United States na UK), a kwatụrụ ya ruo mgbe 2004 na USA dị okpukpu anọ na platinum na ọ bụ ebe iri n'ime mkpokọta sụgharịa afọ (dị ka magazin Billboard) dị.
Krisina dere Kelly Clarkson Miss Independent Christ ma kwadebe ya maka album ya.
Alba Stropped ere 10 n'ụwa niile maka ọtụtụ nde iberibe ụwa dum, ọ pụtara na ọ bụ ihe a na-ewu ewu na United States, kama ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ewu ewu n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
N'ọnwa June, Christina sonyeere Justin Timberlake njem njem America. Ha kpọrọ njem aỊgbagharị na-ezighị ezi(site na ndetu aha ndi oru abuo). N'August, akụkụ nke ọkụ na Atlantic City daraỤlọ Nzukọma si otú a mebie akụkụ nke ngwa. N'ihi na ọ mere tupu mmalite nke ngosi ahụ, a ghaghị kagbuo ma ọ bụ kwụsị oge a na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. Na nkeji iri na ise nke afo, Christina gara n'èzí na United States, mana ugbua na ya onwe ya. N'ụzọ dị otú a, ọ bụghị nanị na a na-akpọ aha nlegharị ahụAkwụsịla. Na njem a, Christina gosipụtara obi ike ya, karịsịa na akụkụ ya nke Europe, n'ihi na America na-agbanwe agbanwe na nke a. Njem ahụ na-aga nke ọma, a na-erekwa ọtụtụ n'ime egwuregwu. Ndị na-agụ magazin ahụRolling Stonenjem a akara akara kachasị mma n'afọ. Christina achachawo isi ya n'oge oji.
Maka afọ 2004, Chingy mere ndokwa ọzọ. Otú ọ dị, a tụgharịrị njem ahụ n'ihi na Christina nwere nsogbu na ụda olu n'oge na-adịghị anya tupu mmalite amalite. Ma akwụkwọ akụkọ British tabloidAnyanwụmara na agbaghawo njem ahụ n'ihi enweghị mmasị na enweghị ihe ọhụrụ. Christina gọrọ ya. Na MTV Video Music Awards, ọ rụrụ Madonna, Britney Spears na Missy Elliot. N'oge arụ ọrụ a, a nụrụ ụda Madonna dị ka Virgin na Hollywood, Christina gwakwara Madonna nke ọma, na-akpata nnukwu ntamu.
N'oge 2003, Christina ghọkwara ihu nke Versace.
2004-2005: nnwefe n'etiti Ụgha na azụ na isi ihe
Na Jenụwarị 2004 bipụtara magazin Britain maka ụmụ nwokeZOOna Christina nwere ike ịbụ onye nkịtị. N'otu mkparịta ụka, o kwuru, sị: "Enwere m mmasị na-ele ụmụ nwanyị karịa ndị nwoke. Na-akwalite, ọ dị m ka m nwee ike ịnwale ụdị mmekọahụ m. Ọ bụrụ na ọ bụ ụmụ agbọghọ, hapụ ha. " O kwukwara na ọ na-enwe mmasị na nwanyị na-abụghị nwoke na nwanyị. "Enwere m nwoke na nwanyị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe m ma enwere m mmekọahụ na-enweghị mmekọahụ. Ma nke ahụ apụtaghị na enweghị m ike ijikọ ụkwụ m ọnụ. "
Christina kpebiri itinye ihe oyiyi ka toro, nke o ji bụrụ otuto.
O dere abụ egwu maka ozi Mercedes-Benz. Obere oge mgbe ọ malitere-arụ ọrụ na ọhụrụ ihe onwunwe na e sijiri ntutu isi ya blond, bee ya na-etinye ihe oyiyi a la Marilyn Monroe. Ọtụtụ Fans-arụ ụka na ndị ọzọ Hollywood kpakpando (dị ka Dita Von Teese, Gwen stefani na Ashley Judd), na-eweta Hollywood nkwado nlekiri n'afọ iri abụọ, m zitere na forties.
Tupu nhoputa ndi ochichi nke US na 2004, Christina sonyeere oru mgbasa oziKpọsaa Onwe Gịma gosiputa na mbadamba ihe na okwuNaanị Ị Pụrụ Ịkwụsị Onwe Gị (Naanị Ị Pụrụ Ịkwụsị Onwe Gị)Nke a na-adọta (ọ bụghị nanị) ndị na-eto eto na-eto eto na ntuli aka. Na ebubo ndị a, a dọtara Christina na ọnụ na-emechi emechi, nke a na-ekwu iji gosi enweghị uche ma ọ bụrụ na i doghị aka. Ọ pụtara na Oprah Winfrey na-egosi iji kọwaa banyere mkpa ọ dị ịme votu.
Ná ngwụsị oge okpomọkụ, 2004 hapụrụ ụmụ nwoke abụọ. Nke mbụ bụ Car Wash, ihe mgbapụta nke egwú Rose Royce. E gosipụtara Missy Elliott na abụ a, e dekọkwara otu a maka ụda nke The Shark Story. Abụ nke abụọ abụkwara ọgbọ, n'oge a na onye na-akpọ Nelly na-akpọ Tilt Ya Head Back. Ụmụ nwanyị abụọ nọ na United States adaala azụmaahịa, ma ọ dị mma karịa na ụwa.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, DVD DVD nke Christina pụtaraBụrụ ndụ na UK, na ndekọ site na egwu ya na Great Britain. Na December, ọ na-esi ísì ụtọDenye, ma ọ bụ nanị zụrụ ụfọdụ mba Europe.
Christina soro Hervid Hancock na-eme ihe nkiri jazz na ihe ngosi nke abụ Leon RuselAbụ Maka Gị, nke ha dekọrọ na album Hancockohere. Maka abụ a, ha nwetara Nhọrọ Grammy maka abụ abụ kacha mma.
Christina laghachiri na Disney. Ọ malitere ime ememe ncheta nke 50 nke DisneylandMgbe Ị Na - achọ Star. Ọ na-arụ ọrụ na Andrea Bocelli na abụAha Noviosmaka album yaAmore, nke e wepụtara na mmalite nke 2006. Ọ rụrụ na bọmbụ ọrụ ebereUnite nke kpakpando(ihe megide ụnwụ) na Johannesburg, South Africa na njedebe nke 2005 tinyere kpakpando dịka Diana Ross na Westlife, nakwa na NovemberEgo ỤmụakaNelsona enweghi.
2006-2008: oge ​​nke Back To Basics na album nke nnukwu hits
Ịlaghachi na isi ihe na-eme njem
Na March, 2006 bịanyere aka na nkwekọrịta ya na Orange Mobile iji gosi ma kwalite Sony Ericsson Walkman mobile na Europe. Ya na onye na-agụ egwú Lebanọn bụ Elipsa na onye na-abụ abụ Korea bụ Rain, ọ pụtara na mgbasa ozi Pepsi. A na-agbasa mgbasa ozi na 2006 n'oge asọmpi nke World Football.
Christina na-agbakwa ọtọ maka mbipụta May nke magazin GQ. Marlene Dietrich kpaliri foto a. Na nke a nke, ọ bụ nakwa a mkparịta ụka ebe o kwuru na ya mmechuihu site ọrụ ibe ya Mariah Carey: "Ọ dịghị mgbe m mesoro m coldly ... na ruo mgbe anyị nọ na a ọzọ na m na-eche na e nwere mara mma mmanya na-egbu na gwara m n'ezie na-emenye ihere ihe. "Mariah kwuru na pịa:" Ọ dị mwute na-eji aha m na akwusila okwu site n'oge gara aga na-eme ka ya onwe ya ọzọ anya. "
Aguilera wee sị: "My bu n'obi abụghị ka iwe iwe Mariah na ọ bụla e kwuru na e si na-ekwu. Ukwuu na-akwanyere ya. "Christina nche, bụ onye na-arụ ọrụ ruo afọ asatọ na Madonna na afọ isii na Jennifer Lopez, ọ sịrị:" Ndị ọzọ nwere ha arụmọrụ ihe banyere show na-nkiri, ma nke a girl (Christina ọ pụtara, N'ezie) nwere ike na-abụ abụ. "
Akwukwo studio nke atọ nke Christinino na blọọgụ Bekee na-ebipụta na 15. Ọgọst na iri na atọ mba bịara ebe mbụ. Onye ọbụ abụ na-edu ndú Ọ bụghị Onye ọzọ na - aga nke ọma, na United States ọ nwetara isii na UK na TOP 3. Rolling Stone magazine na-etinye ya na 18. tinye na ndepụta kacha mma nke 2006. Christina kọwara nke a n'abali dị ka nloghachi nke iri abụọ, iri atọ na ụra, nke pụtara jazz, blues, mkpụrụ obi, ma na-emetụ aka n'oge a.
Otu n'ime ndị na-emepụta akwụkwọ a bụ DJ Premier, Kwamé, Linda Perry na Mark Ronson. Edere otu song, "FUSS," iji mee ka esemokwu dị n'etiti Christina na Scott Storch n'oge ndekọ nke Stripped album. Nke abụọ nke si na albumGaa na ndaberebụ abụMwute. O tinyere nke anọ n'ime ọkwa ụwa, nke mbụ na chaatị Billboard's Eurochart Singles Sales, na ebe iri na itoolu na Billboard Chart.
Na mgbakwunye na ịkwalite album ya, Christina na P. Diddy kwadoro na song Tell, nke nwere ike ịchọta na pịa Play Play. E wepụtara otu ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ 2006. Enye ama ọtọn̄ọ ke ọyọhọ usen duop ke English, ndien enye ama ọyọhọ itie itiakiet ke urua emi.
2006 kwupụtara na SeptemberBaby Jane(dịka Christina na-ekwukwa mgbe ụfọdụ) ya Back To Basics tour, na 18 concerts na Europe, na 17 mbụ egwu. November na 17 ikpeazụ. December na Prague. N'adịghị ka atụmatụ mbụ ha, ha nwere ike ịhazi otu njegharị nke obere klọb nke 20. Febụwarị na Houston ma kee 5. Ike na Florida.
Ma ọ na-ekwusi ike na ọ ka ga-ahazi nlegharị ụkwụ nke ndị klọb.
N'ime ọnwa ise, mkpụrụedemede Back to Basics 3,3 rere ọtụtụ nde ego, nke 1,3 nde na United States.
Onye nke atọ site n'akwụkwọ a bụ Candyman. E mere ka 25 gbaa fim. January ma wepụtara ya na teknụzụ TV n'oge February 2007.
Na njedebe nke September, 2008 kụrụ ụlọ redio ndị Czech n'otuNa - edebe 'Ọfụma, nke bu n'ihu album nke otu aha nke 7 weputara. November 2008. Nke a bụ nhọrọ nke abụ kachasị mma site na 1999 na 2008. Ị ga-achọta ụmụ nwoke dị kaMkpụrụ Na Na Na Na Na, A Girl Girl Wants, I Turn To Youma ọ bụOnye agha, mara mmama ọ bụ mgbe e mesịrịỌ bụghị Onye ọzọ, Candyman. A na-anọchite anya ndị na-eto etoMmanụ 2.0, Na-edebe Gettin 'Mma, Dynamite.
2010 - N'ihe: Bionic album, Vieti na fim na Ngwori egwu
Ọ bụ 8 tọhapụrụ bọmbụ nke isii nke Bionic. June 2010. Aguilera jikọrọ ya na Linda Perry, onye na-abụ abụ MIA ma ọ bụ onye nkiri America Nicki Minaj. FotoBionic, nke onye ọbụ abụ ahụ si na pop pụta na ngwá electronic na egwú ịgba egwú, natara ndị ọbịa ọha mmadụ. A na-agbanwe ahịa ahịa na-agbanwe agbanwe, na-ebute ụzọ na nke atọ na US 110,000 15. N'oge na-adịghị anya mgbe a tọhapụsịrị ya, onye ọbụ abụ ahụ kwụsịrị ịgba egwú ahụ ma mechie njem nleta okpomọkụ. Ọ kọwara na enweghị oge nkwadebe dịka ihe kpatara ya. Bionic Album bụ onye mbụ na-abụ abụ na ọrụ ya, nke ọ na-enwetaghị Nhọrọ Grammy. Onye na-abụ abụ mesịrị gwa otu n'ime ajụjụ ọnụ: "Enwere m obi ụtọ na album ahụ. Anyị mere nke ọma n'ọkwado, ma ihe kpatara ya metụtara ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ. Ọ dịghị ihe na-egbochi m, ma ọ bụ ihe mkpali maka ọrụ ọzọ. "2010. November XNUMX natara kpakpando Christina na Hollywood Walk of Fame.
Na November, 2010 gosipụtara otu ihe nkiri Varieté, nke Christina Aguilera na-egosipụta isi ọrụ nke nwa agbọghọ bourgeois Ali Rose, onye hụrụ ịhụnanya na ihe ịga nke ọma na Los Angeles Fox Club.A na-agbapụ ụda ihe nkiri ahụ ma bụrụ abụ asatọ.N'akụkụ Aguilera, Cher na Stanley Tucci, Eric Dane, Kristen Bell na Cam Gigandet pụtara na fim ahụ.
Tinyere ụda olu, Christina Aguilera na duet mere yaỤlọ Nkumeya na onye American rapper TI maka ndekọ yaỌ dịghị Ebere. 6. Febụwarị 2011 bụrụ abụ abụ na Super Bowl ikpeazụ. Ma, o nwere ọtụtụ nkatọ maka arụmọrụ ya n'ihi na o chefuru okwu nke abụ. Ihe ahụ merenụ rịọrọ mgbaghara na TVNN TV.
N'April, Adam Levine, Cee Lo Greene, na Blake Shelton, ndị jury nke Voice ahụ, so na 2011. Egwuregwu mgbasa ozi ahụ na NBC malitere ịkụ ozugbo na otu n'ime ihe ndị na-ekiri na-egosi.Aguilera dere abụ ahụ dị ka Jagger na ụda Maroon 5, otu n'ime ndị juro Adam Adam. Abụ abiawo n'elu US Billboard Hot 100.
Na May, 2011 Aguilera kwupụtara na ọ na-ese ihe ndekọ ọhụrụ nke nwere ike ịtọhapụ na mbido mmiri na oge okpomọkụ nke 2012.
9. November 2012 Christina weputara ya DVDNUMX studio album, nke bu aha "Lotus". Christina na album a na-akọwa ahụmahụ na mmetụta ya na afọ ole na ole gara aga. Lotus bụ (dịka ya onwe ya na-ekwu) dịka iwughachi! Site na nbudata a biara nke oma n'onu gi nke oma, nke bu nke mbu Christinin iji nata asambodo VEVO. Ndị ọzọ abụọ signgles, Ka Ịhụ Ịhụnanya na Nanị nzuzu, enweghị ihe ịga nke ọma. Amaghi ebe eburu ihe nkwado nke akwukwo di iche, ya mere, ihe oma abiagh ...
Nso nso nọ n'ọrụ ndị ọrụ
-amu amu brigeedi Brigade mgbatị oge ọgbụgba mgbatị 2017 celebrity celebrity download downloads girl ụmụ agbọghọ Ejiji film free eme ihe nkiri eme omee actresses ụmụ agbọghọ music ọrụ lolita lolitku lolita enweteghi ịme ngosi uwe music maka enwechaghị ahụmahụ ụmụ agbọghọ n'ihi na ndị inyom ọrụ Gosi ụmụ akwụkwọ download talent Victoria na Nzuzo Ndị Ukwuu free na-abụ abụ na-abụ abụ onye ọbụ abụ onye ọbụ abụ nwaanyị ndị inyom
Rokytnice nad Jizerou, ugwu na Giant Mountains, Lysá hora
Ọtụtụ gbaa ... GỤKWUO
Taylor Alison ... GỤKWUO
Johnny Hallyday (* 15 .... GỤKWUO
Nkwado a na-enwetụbeghị ụdị ya ... GỤKWUO
Gregory Stuart ... GỤKWUO
Donald John ... GỤKWUO
ọhụrụ | arụsi ọrụ ike | ewu ewu | alphabetically
ọrụ tupu 2 ọnwa 3 izu
Fim ahụ na aghọ
ọrụ tupu 3 ọnwa 2 izu
Music, ịbụ abụ
Arụ Ọrụ 8 ọnwa gara aga
ịme ngosi uwe
ihe omume tupu afọ 1, ọnwa 3
Adobe Photoshop mgbatị celebrity gallery egwuregwu ugwu Uncategorized software video YouTube Akụkọ
Mgbatị, ịme ngosi uwe, eme, ihe nkiri, ọrụ ya, na music, na-abụ abụ, video
Banyere n'ime akaụntụ gị
Abanye na na Facebook
I chezọrọ ahambanye gị ma ọ bụ paswọọdụ?
Chefuru gị nkọwa?
Send m nkọwa!
AAH, na-eche, m na-echeta ugbu a!
Anyị na-eji kuki nke mere na anyị nwere ike hazie na soro mgbasa ozi na ike a odi mfe na gburugburu ebe obibi. Mgbe a na saịtị na ihe ị pịgharịa, na i gosi gị nkwekọrịta na anyị nwere ike iji kuki na-anakọta ozi na ihe nkesa VipCasting.cz na karịrị. Ịgụ banyere, ihe ndị ọzọ, olee otú i nhọrọ: Okgụkwuo